Maalinta: Noofambar 26, 2019
Hanlı Çetinkaya Qalabka Korantada Qalabka Rakibaadda Tijaabinta Tirada Natiijada Tilmaanta 2019 / 502870 GCC qiimaha xNUMX / 56.049.329,86 TL iyo qiyaasta qiyaasta 70.057.456,40 TL ee Agaasinka Tareenka Waddanka Turkiga (TCDD) waa Hanlı Çetinkaya [More ...]
Metrobus ayaa joogsanaysa waqtiga sugitaanka uu bilaabmayo; IETT, istaagida Metbbus wuxuu bilaabay inuu calaamado u sameeyo muwaadiniinta inay sugaan meesha saxda ah. Saldhigyada Zincirlikuyu iyo Şirinevler ee lagu bilaabay dalabka, waxay ku faafi doonaan dhammaan saldhigyada waqti ka dib. Khadka Tareenka [More ...]
Gudoomiyaha Seçer wuxuu baaray Dekadda Mersin; Duqa Magaalada Mersin ee Magaalo Weynta Vahap Seçer wuxuu booqday Mersin Port wuxuuna xog ka helay saraakiisha Maareynta Maareynta Caalamiga ah ee Mersin (MIP). Gudoomiyaha Seçer, Mersin International Port [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM) Kucukcekmece Beşyol Metrobus Stop sababtuna waa wiishku ma soconayo sababtoo ah waqtiyada adag ee naafada DHA'nın waxaa ku jira qoraal qoraal ah oo ku saabsan wararka la sameeyay. Bayaanka asansör Kor u qaadista joogsan ee su'aasha laga taagay [More ...]
Jadwalka Jadwalka Khariidadda Seoul iyo Joojinta: Seoul waa caasimadda Kuuriyada Koonfureed waana magaalada ugu caansan waddanka. Qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha waa Seoul ama aad ugu dhow Seoul [More ...]